Ceramic Substrate China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ceramic Substrate - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ceramic Substrate)
Yenziwe nge-alumina oxide, noma i-nitride aluminium Alumina ceramic substrate isetshenziswa njalo njengebhodi lesifunda eliphrintiwe (i-PCB), njenge-substrate ye-DBC, i-Siliver yokugqoka isembatho, i-Nickle i-substrate yokugqoka nokunye okunjalo. Ubukhulu bokuqina kwe-substrate ye-ceramic ehlanganisiwe iyakwazi...
Ukuhlanzeka okuphezulu 96% 99% 99.6% ama-alumina ceramic substrates Njengama-substrates ochwepheshe we-ceramic, siye sanikeza ama-substrates e-AlN ceramic webhodi lesifunda elincane lefilimu kanye nebhodi lesifunda elihlanganisiwe iminyaka eminingi. Le substrate ye-ceramic ihlotshiswe ngokukhishwa kwe-tape,...
Metallized Ceramic Insulators for High Voltage Feedthru Senza ukuhlukahluka kwezitshalo ezihlukahlukene zensimbi ze-ceramic ezinemininingwane ehlukile, njenge-tube ensimbi yoceramic, indandatho ye-ceramic ensimbi, i- substrate ene-metallic ceramic njalonjalo. Lezi zinkamishi zensimbi zenziwe nge-aluminium oxide,...
Yenziwe nge-alumina oxide, noma i-nitride aluminium Alumina ceramic substrate isetshenziswa njalo njengebhodi lesifunda eliphrintiwe (i-PCB), njenge-substrate ye-DBC, i-Siliver yokugqoka isembatho, i-Nickle yensimbi yensimbi njalo njalo. Ubukhulu bokuqina kwe-substrate ye-ceramic ehlanganisiwe iyakwazi ukunikela,...
I-High Power LED i-substrate ye-ceramic
I-High Power LED i-substrate ye-ceramic Ubukhulu bokuqina kwe-substrate ye-ceramic ehlanganisiwe iyakwazi ukunikela, ubukhulu obujwayelekile buhlanganisa 0.25mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm, 0.635mm ne-1.0mm. Yenziwe nge-alumina oxide, noma i-nitride aluminium Alumina ceramic substrate isetshenziswa njalo njengebhodi...
I-pink alumina ceramic substrate enhle kakhulu
I-pink alumina ceramic substrate enhle kakhulu Sinikeza izinhlobo eziningi ze-alumina, i-zirconia ne-nitride aluminium ceramic substrate ngokukhishwa kwe-tape nokucindezela okumile kusuka kumaminithi. ubukhulu obukhulu obukhulu ngobukhulu obuhlukile, kufaka phakathi ubukhulu obukhulu buka-0.2mm, 0.30 obukhulu, 0.38...
I-Metallised Ceramic Component yeNew Industry Industry Embonini entsha ye-energy, kunezici eziningi ezihlukahlukene zokwakhiwa kwe-ceramic insulator ezidingekayo ukuze zihlangabezane nezidingo zabo ezikhethekile zokubhonga. Uhlobo oluyinhloko lwe-metallic lubandakanya lokhu okulandelayo: 1. Umzimba oqoshiwe we-ceramic...
I-Ceramic Insulator Ehlanganiswe Nickle Plating
I-Ceramic Insulator Ehlanganiswe Nickle Plating I-metallization ye-aluminium oxide ceramics (min. 94.4% i-alumina) yenziwa inqubo ye-molybdenum-manganese nge-hydrogen ne-nitrogen yehlisa isimo ngaphansi kuka-1250 ℃ ~ 1450 ℃ . Ngemuva kokunqotshwa, i-metallic coating izokunamathela emzimbeni wesisekelo se-ceramic,...
Ngesinye isikhathi, ukuze wenze ukuthambisa phakathi kwe-ceramic nensimbi ekwenzeni ubhontshisi, umzimba we-ceramic udinga ukugcwala ngegolide. Siyakwazi ukukhiqiza ubukhulu bokucaciswa okuhlukile kusuka usayizi omncane kuya kwesinye sosayizi omkhulu. Ngokusekelwe emgqeni wethu wokukhiqiza olunzulu kusuka ekwenzeni...
I-Alumina blocks ceramic Incazelo: I-Alumina blocks ceramic yenziwe ngamaphesenti angu-95, 99% noma angu-99.5% aluminium oxide nge-ceramics, ingakhiwa ngokucindezela okumile ngomzimba obukhulu we-ceramic. Siyakwazi ukwakha ubukhulu bebhokisi le-ceramic njengomdwebo wamakhasimende ngamunye kanye nokucaciswa, ngezinye...
I-Ceramic yokugaya isher Incazelo : Ukushisa kwe-ceramic ephakeme yokugesi kagesi yenziwe nge-steatite C220, ingafakwa ngokucindezela okushisayo ngomzimba obunzima we-ceramic. Siyakwazi ukwakha ubuciko be- ceramic yokufaka umshini wokushisa nge-ceramic njengemidwebo yamakhasimende kanye
I-Ceramic Body yamaThubhu we-X-Ray
I-Ceramic Body yamaThubhu we-X-Ray I-metallized body ceramic yamatayipi e-X akhiwa ngama-alumina oxides ne-min. Ukuhlanzeka okungu-95%, Kungenziwa ukubunjwa ngokucindezela okumile, ukucindezela okushisayo, ukucindezela kwe-ISO. Esikhathini esivamile, kokubili i-molybdenum-manganese ne-Tungsten njengethandani ethandwa...
I-ZrO2 i-Ceramic Substrate
99.5% Al2o3 Ceramic Substrate